दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न ! - Nepali in Australia
July 10, 2021 autherLeaveaComment on दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न !
काठमाडौं । आज दिउँसो काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको छ । बानेश्वर क्षेत्रमा परेको पानीले आवतजावत गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा परेको पानीले एउटा स्कार्पियोको आधा भाग डुबेको छ ।
बस पर्खि रहेका यात्रुहरु भारी वर्षाका कारण निकै विचलित भएका छन् । दिउँसो एक्कासी परेको पानीले बानेश्वर सडकखण्ड जलमग्न भएको छ । सडकमा भारी वर्षा खोला बनेर उर्लेको छ ।
आज पनि देशभर वर्षा जारी रहने भएकाले विभिन्न स्थानमा बाढी, डुबान तथा पहिरोजस्ता विपद् हुने जोखिम रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। यसै क्रममा बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज विशेषगरी काठमाडौं सहित २७ जिल्लामा जोखिमपूर्ण बाढी आउने सम्भा वना औंल्याएको छ।
महाशाखका अनुसार ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुंवासभा, ओखलढुंगा, मोरङ, खोटाङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, लमजुङ,गोरखा, नवलपुर, सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट, दैलेख, दार्चु ला, बझाङ, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, अछाम र डडेल्धुरामा आज बाढीको मध्यम जोखिम छ।
जापान पु’ग्यो जुम्ली मार्सी र सिमी, क्यानडाबाट २० टन माग